IPodcast 8x35: Sithetha ngezintathu ezinkulu | Ndisuka mac
IPodcast 8 × 35: Sithetha ngezintathu ezinkulu
Kule veki, sidlulile ngokuthetha ngokuthetha ngawo onke amarhe aqhubeka ejikeleze i-iPhone 8. Lo mbandela uye waba yintloko yokwenyani kubasebenzisi abaninzi kuba eyona nto iqinisekileyo kuwo onke la marhe ayonto. Kwiiveki ezimbalwa ezizayo i-WWDC 2017 ibhiyozelwa apho kunokwenzeka ukuba iApple isibonise into entsha kwi-iOS enokuthi isixelele apho iithoto zinokuya khona. Ngelixa sikwiPodcast yethu sithethile ngeSurface Pro 2017 entsha, isixhobo esithi gcina uqhagamshelo lwe-USB 3.1 endaweni yokukhetha i-USB-C, njengoko iApple ibisenza iminyaka embalwa.
Sithethile nangeendaba uGoogle aziveze kwiveki ephelileyo kuGoogle I / O, inkomfa apho eyona nto itsale umdla wethu yayiziindaba zokuba iifoto zikaGoogle ziya kusizisa ngeentsuku ezimbalwa, ezinye iindaba ezinokuthi iApple inako funda kwaye unikele kwiinguqulelo ezizayo ze-iOS kunye neMacOS, ngakumbi xa usabelana ngeealbham zeefoto nabanye abantu.
Okokugqibela, siyaphikisana ukuba ngaba indlela ethathwa nguBragi ngee-headphones zeDash yeyona iApple inokulandela kwixesha elizayo. Ukuthathela ingqalelo ukuba zii-headphone ezithi vUhlobo olusisiseko luxabiso kwi $ 369 Kwaye ukuba enkosi kuwo onke amanqaku asinika wona, iyasithintela kungekuphela nje ukuba ilayishwe ngesacholo sokulinganisa kodwa nokuba sikwazi ukudlala umculo, iyanqanda ukuba nathi kufuneka silayishwe nge-iPhone yethu.
Bhalisa kwisitishi sethu ukufumana izaziso zokuba ukuqala kokurekhodwa kwe-podcast, ukuze ube nakho ukuthatha inxaxheba bukhoma ngemibuzo, amathandabuzo, iingcebiso ... Sicebisa ukuba Rhuma kwi iTunes ukuze ukuba zezakho iiPodcasts, waziswe ngawo onke amaxesha ngesiqendu sokugqibela esirekhodileyo. Kwi esi sixhobo uya kungena Ijelo leTelegram apho uya kufumana onke amalungu epodcast, ukuba ufuna ukubuza umbuzo, phendula umbuzo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPodcast 8 × 35: Sithetha ngezintathu ezinkulu
Ndizifumana njani kwiipodcast?